अतितको सम्झना: म अनि मेरो त्यो नयाँ हिल जुत्ता-शशी केसी - Enepalese.com
शनिबार, कार्तिक २ २०७६
वासिङटन डिसी 00:25
इनेप्लिज २०७६ असोज ५ गते १०:४२ मा प्रकाशित
दशैं अब त आई नै सक्यो, जतिजति नजिक आउँदै जान्छ नी उतिउति ति बाल्यकालतिर मनाएको याद आउने रहेछ। मेरो बाल्यकाल पनि उस्तै हो सबै मध्यमबर्गीय नेपालीको केटाकेटीहरूको जस्तै, कहिले भनेको जस्तो सबै पुग्ने, कहिले एउटा माग्यो अर्कै-अर्कै पाउने जति रोईकराई गरेपनि ।
कुरा यस्तै ७-८ पढ्नेबेला हो, केटाकेटी उमेर सकिएको र अलिक युवा अवस्था लाग्दाको या भनौं टिनेजर बेलाको। ओहो, अहिले जस्तो होर ! त्यो बेला, टिनेजर समुहका केटाकेटीले जस्तो भन्यो त्यस्तै थरीथरीका लुगा,जुत्ता बजारमा किन्न पाउने। केही भने जस्तो नपाउने, अधकल्चो टिनेजर।न साना केटीहरूले लगाउने फ्रक लगाउँदा सुहाउने, न त ठुला केटीहरू जस्तो कुर्था, मिड्डी नै सुहाउने ।
बल्लबल्ल दुई दिन भोटाहीटीदेखि न्युरोडसम्म पसल-पसल घुमेर लुगा पाईयो”टु पिस” सेट, सर्ट र स्कट। लुगा किनाईको पनि आफ्नै छ कथा, कतै साइज नमिल्ने, कतै रंग, कतै सबै मिल्यो पैसाको हिसावकिताव नै नमिल्ने पसलेसँग,उफ् !
लुगा किनेपछि जुत्ता चाहियो।अव,टिनेजर बेला, कता मलाई नी रन्को लाग्यो । हिल जुत्ता लगाउने,शायद होस्टेलमा साथीहरूसंग दशैंमा के के किन्ने कुरा भएको थियो होला केही, हुन त हाम्रोबेलाको साथीहरू, दिदीबहिनीभन्दा उचाईमा म अलिक अग्लै हो तैपनि “हिल लगाउने” रहर त रहर नै हो। लुगासँग मिल्ने जुत्ता खोज्दा खोज्दा भेटियो “बो”भएको सेतो, २ इन्च हिल पनि भएको।
सेतो त हुन्न भन्ने मम्मी, फोहोर छिट्टै हुन्छ रे, होस त, आफूलाई कस्तो मन परेको छ। किन्न दिए पो, टिल्पिल टिल्पिल आँखामा आँशु भरि सक्यो। बल्ल बल्ल अनेक गरेर त्यस्तै डिजाइनको कालो किनिदिनु भो। जे भएनी हिल भएको जुत्ता किन्न पाउँदा मन त्यसै त्यसै खुशी भइ हाल्यो। अव दिन गन्न शुरू भो टिकाको। लुगा त टिकाको दिनमात्र लगाउनु पर्छ नँया भनेकोले धैर्य नै गरे नलगाई। जुत्ता त के छ र दिनमा कति पटक लगाएर हिल बजाउँदै हिँडे नै कोठादेखि बाहिरभित्र।
आयो दशैंको टिकाको दिन, बेलैमा राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तयार, कालो हिल जुत्ता पनि ढोका बाहिर तयार छ नै। घरको टिका सकिएपछि, लागियो मामाघर हजुरबुबा,हजुरमुमा, मामामाइजुको हातबाट टिका थाप्न । हुन त त्योबेलाको काठमाडौंको बाटोमा गाडीहरूको घुईँचो त्यति हुँदैन थियो,तर धन्न ट्याक्सी चाहीँ चल्थ्यो पुग्नेमात्रामा।घरदेखि चोक ट्याक्सी कुर्ने ठाँउसम्म हिल भएको जुत्ता टकटक बजाएर पिच सडकमा हिँड्दाको मज्जै के हो,के नी।
मामाघरमा सबै ठुलीआमा, सानीआमा, मामा सबका छोराछोरी सबै नयाँ नयाँ लुगा,जुत्ता लगाएर एक आपसमा भेट हुँदा रमाइलो भयो नै। टिका, खानपान सकाएर बेलुका घर लाग्नेबेला भयो। हिल जुत्ता ! त्योपनि नयाँ,अनि सार्हो न सार्हो छालाको, देखाई हाल्यो आफ्नो कमाल, ओहो खुट्टाको पछाडीको कलिलो छाला त तिछोरी हाल्यो, रगत पनि आयो भलभल,बल्ल तल्ल टेप टाँसेर लगाउँदै हिँडियो, एकघरदेखि अर्को मामाघर टिका थाप्दै।
अब बिहान,दिँउसो ट्याक्सी पाएपनि, बेलुका त कता पाउनु र।आक्कल झुक्कल आइ हाले पनि सबै टिका लगाएर फर्कनेहरूको ट्याक्सीमा चड्न तछाडमछाड, कुटाकुट नै पर्ला जस्तो । हिँड्नु पर्र्थ्यो जता पाउँछ तेतै चड्ने भन्दै। ओहो, खुट्टामा ताजा घाउ कताको हिल लगाएर टकटक हिँड्न सक्नु र! हिल जुत्ता बोकेर खाली खुट्टै।
त्यस पछिका अरू दशैंका टिका थपाई भए पुरानै जुत्ता मै ! नयाँ हिल जुत्ता धेरै दिन कुरि रहयो लगाइन कोठाको बाहिर !!